मनिषाको बारेमा रबिले मुख खाेले, हेर्नुहाेस् के भने ? – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/मनिषाको बारेमा रबिले मुख खाेले, हेर्नुहाेस् के भने ?
मनिषाको बारेमा रबिले मुख खाेले, हेर्नुहाेस् के भने ?
अभिनेत्री मनिषा कोइरालालाई अहिले भारतीय मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आ-क्रम^ णको तारो बनाइएको छ । नेपाली राष्ट्रियताको पक्षमा मनिषाले गरेको एउटा ट्विटलाई लिएर भारतीयहरू निम्नस्तरको गा-लीगलौजमा उत्रेका छन् । भारतीय मिडियाको आ-रोप छ,मनिषाले भारतको नुन खाएर चीनको पक्षपोषण गरिन् ।
एबीपी न्युजले ठाडै भन्यो,खाती नेपाली और गाना गाती चाइनाकी?उनले चीनकै उक्साहटमा यो ट्विट गरेको भन्नेसम्मको आ-रोप समाचारमा लगाइएको छ । हास्यकलाकार दीपकराज गिरीचाहिँ भारतीय मिडियाको यो प्रोपोगाण्डालाई हास्यास्पद मान्छन् । अनलाइनखबरसँगको कुराकानीमा उनले मनिषाको राष्ट्रप्रेम स्वभाविक र सही समयमा प्रकट भएको बताए ।
दीपकराज भन्छन्,‘मनिषा कोइराला पहिलो नेपाली कलाकार हुन् । जसले त्यो स्थानमा पुगेर गर्वसाथ आफूलाई नेपाली भनेरै चिनाइन् । उनकै हाराहारीमा चर्चा पाएका केही कलाकार आफूलाई नेपाली भन्न रुचाउँदैनन् । तर,मनिषालाई भारतमा पनि नेपाली सुन्दरी भन्ने गरिन्थ्यो । उनी नेपाली छोरी भएकाले नेपालको पक्षमा बोल्नु कुनै अनौठो कुरा होइन ।’मनिषाले गरेको ट्विटलाई भारतीय मिडियाले‘ट्विस्ट’गरेको दीपकराजले बताए ।
नेपालमा हुने जुनसुकै राष्ट्रवादी सं-घर्षमा चीनको हात देख्ने भारत सरकार र त्यहाँका मिडियाको सोचाइ नै मुर्खतापूर्ण रहेको उनको टिप्पणी छ । उनी भन्छन्,‘मनिषाले कहाँनेर चीनको समर्थन गरेकी छन्? नेपाल र चीन मिलेर भारतमाथि धा-वा बोल्नुपर्छ भनेर लेखेकी छन् र? उनले त नेपालको सरकारले आफ्नो सीमा रक्षाका लागि लिएको पहलप्रति खुसी व्यक्त मात्रै गरेकी हुन् । यति गर्दा उनीहरूले अनर्गल प्रचार किन गर्ने?’
अहिलेको समयमा हरेक सच्चा नागरिकले देशको पक्षमा लेख्नु र बोल्नुपर्ने दीपकराजले बताए । मनिषाजस्तो हाइप्रोफाइल अभिनेत्रीले लेखेका कुराले झन् ठूलो महत्त्व राख्ने उनको भनाइ छ ।‘मनिषाले लेख्दा उनको आवाज बलिउड र भारतभरि फैलियो । तर,मिडियाले उनको ट्विटमा नचाहिँदा मरमसला थपेर अतिरञ्जित बनाइरहेका छन् । भारतीय मिडियाको यो चरित्र हामीले पहिल्यैदेखि देख्दै आएका हौं,’गिरीले भने ।एउटा देशको नागरिकले अर्को देशमा काम गर्नु र करिअर बनाउनु अनौठो कुरा नभएको उनी बताउँछन् । तर अर्को देशमा काम गदैमा राष्ट्रभक्ति कम नहुने उनको भनाइ छ ।
‘भारतमा उनले काम गरिन् र पैसा कमाइन् । तर,त्यसको ट्याक्स पनि भारतलाई नै तिरिन् । जति भारतमा कमाएकी छन्,त्यसबापतको ट्याक्स पनि नेपाललाई नभएर भारतलाई नै तिरेकी छन्,’दीपकराजले भने । उनी थप्छन्,‘भारतको नुन खाइन् भन्नु नै आ-पत्तिजनक कुरा हो । उनलाई यत्तिकै माया लागेर भारतीयहरूले त्यो स्थानमा पुर्याएका होइनन् । आफ्नो अभिनय र प्रतिभाको बलमा पुगेकी हुन् । उनले पनि भारतीय चलचित्र उद्योगलाई योगदान दिएकी छन् । काम गरेपछि पारिश्रमिक कसले पाउँदैन ?’यस्तै चर्चित पत्रकार रवि लामिछानेले पनि नायिका मनिषा कोइरालाको सपोर्ट गर्दै भन्छन्:
मनिषा कोईरालाको एउटा टुइटले यति धेरै पसिना ? कठै भारतिय मिडिया!आफ्नो माटोको पक्षमा बोल्ने एक नायिका माथी गाली गलौज जस्तो तल्लो स्तरमा उत्रनुपरेछ । कहिल्यै अर्काको उपनिवेश नभएको,स्वतन्त्रता दिवस कहिल्यै मनाउन नपर्ने,जन्मै देखि स्वतन्त्र देश नेपालकी छोरी हुन्–मनिषा कोइराला,अनि बोल्दिनन त?
जनकपुर ल्याबमा कोरोना पोजेटिभ, हेटौंडामा नेगेटिभ १६ असार, रौतहट । जनकपुरस्थित प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले कोरोना पोजेटिभ भएको रिपोर्ट दिएपछि सोमबार साँझ…
आरडिटी किट अ’भाव ,भएपछि को’रोना स’ङ्क्रमण परीक्षण प्र’भावित सबै रिपोर्ट नेगेटिभ
अब ‘फेस सिल्ड’ नलगाई सार्वजनिक यातायातमा चढ्न नपाइने
जोर–बिजोर नियम लागू भएपछि १४ हजारभन्दा धेरै गाडी कारबाहीमा